Njengoba zikhula ingane ubisi lukamama ayisekho umthombo enkulu amandla ngaye. Lokhu okwamanje iza cishe izinyanga eziyisithupha. Isizathu itholakala lokuthi ukuthi ubisi lwebele ayikwazi ngokugcwele ukuhlangabezana zonke izidingo umzimba landa, isimiso sokugaya ukudla bungene ilungele ukudla ukudla okusha.
Ngokuvamile nokuyenga lokuqala iqala iphalishi ketshezi, bese kuba yisikhathi ukuba yemifino puree, kulandele kancane wethulwa imenyu kwenyama ezihlukahlukene imikhiqizo izithelo. Njengoba bekhula, umntwana kukhona isithakazelo esikhulu kuleli "omdala" ukudla. izithelo exotic ezifana ikiwi, amawolintshi, umango namagilebhisi, kumele inikwe ingane okungenani. Futhi abazali abaningi ngenxa yokungabi nokuhlangenwe nakho angazi kanjani, futhi ngasiphi yobudala izingane zingasizwa banikezwe ikiwi.
Kafushane mayelana izithelo
Kiwi kubhekwa lapho kwazalelwa North-China, kodwa namuhla lesi sithelo ikhula emazweni amaningi: USA, Japan, Italy, eNew Zealand, Greece, Spain. Umphakeli eyinhloko izithelo eRussia New Zealand. Kuyinto kuleli lizwe ukuthi lethiwa engavamile. Kiwi - inyoni ehlala lezo zindawo ukuthi ibukeka ifana kakhulu izithelo igama elifanayo. Futhi singajabulela "ugqumugqumu Chinese" unyaka wonke, ngaphandle kokubukela phansi esikhwameni. Futhi izingane nje kulesi sithelo umbala. Kodwa abazali abakhathalelayo awazi ngasiphi yobudala ongasinika izingane ikiwi. By the way, ososayensi bathi Kiwi - berry, hhayi izithelo.
Ukunambitheka izithelo zonke wazizwa ngendlela ehlukile. Kuyo ungaziqhenya amanothi sitrobheli, banana, ikhabe, ikhabe, ugqumugqumu ngisho uphayinaphu. Futhi lokhu berry isimangaliso ilahlekelwa impahla yayo nenzuzo ngisho ngesimo okusemathinini.
Akumangalisi ukuthi abantu Ziningi imibuzo enjengokuthi "ongasinikela umntanakho ikiwi kanye ngasiphi yobudala." Phela, leli izithelo yirekhodi nganoma yisiphi equkethwe amavithamini kanye ukulandelela izakhi:
Phosphorus, i-potassium, i-calcium one-fluoride, ithusi, boron, i-zinc, i-iodine magnesium, nensimbi.
Amavithamini A, B1, B2, B6, C, E kanye PP.
acid Nicotinic, mono- futhi disaccharides, wezokudla fibre.
Kiwi ngasiphi yobudala can ingane: izinzuzo futhi efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka
Odokotela namanje abavumelani ngombono. Futhi abazali njalo ukubuza, "Ingabe izingane ikiwi?", "Imihlomulo efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka?" "Ngasiphi yobudala kungaba ephephile ukungena ekudleni lesi sithelo?"
Omunye umbungu igcwalisa imfuneko sika-vitamin C, okuqukethwe yayo uginindela mkhulu inani orange kanye sitrobheli. Iphinde kusiza ukuqinisa amasosha omzimba futhi ukulwa nezifo nama-virus.
Izithelo has ukubunjwa yayo fibre okubalulekile, ikakhulu izinto ezibalulekile ukuze ingane wamathumbu. Imicu yotshani Maholoholo neqhaza esifike ngesikhathi wamathumbu ukuhlanzwa.
Kiwi kunomphumela laxative. Isithelo thins kwesitulo futhi usiza ukuyisusa ngobumnene kusukela amathumbu. Ingabe Kiddies ephelele ne ukuqunjelwa ezingalapheki.
Magnesium eziqukethwe izithelo, kuqinisa Imithambo yegazi. Ingane buzoba buncane nokulimala.
Kiwi kunciphisa ingozi ezinso ngoba kunomthelela ukususwa lula nosawoti emzimbeni.
I berry Isimangaliso cishe awukho ushukela, 84 amaphesenti angu izithelo liqukethe amanzi. Kungaba ngokuphepha inikezwe izingane ubudala ekuqaleni sikashukela.
Izithelo abadabuka kwamanye amazwe, futhi-ke kufanele sithathwe ngokuqapha. Ezikhathini zaseSoviet, kwakungesona angavamile. Ngenxa yokungabi nokuhlangenwe nakho nomkhulu nabazali kudingeke ukuba sincike odokotela, i-Internet kanye nelwatinchanti lwabo. Imibono washintsha nodokotela bezingane. Ngasiphi yobudala can a kiwi ingane? Naphezu izimfanelo usizo, ingase futhi ibe yingozi:
Izingane nge hypotonia ikiwi Kunconywa. Potassium e "ugqumugqumu Chinese" nomthelela blood pressure kanye kungase kunciphise ke.
Isithelo kunomphumela isisu. ukusetshenziswa njalo izithelo komthwalo osindayo izinso wengane, okuholela ukuphazamiseka ibhalansi acid-ane-alikhali. Futhi wageza phosphate excreted.
Amathuba komzimba nezinto Kiwi ongaphakeme, kodwa ukhona kungaba ukuqubuka ezinzima, ukulunywa, edema elingenhla ipheshana zokuphefumula futhi ngalo ingaphakathi ngomlomo.
Izithelo Exotic akufanele isetshenziswe ezinganeni iguliswa ezinye izinhlobo zokudla. Kiwi kungaba avuse futhi babhebhethekise ukudla ukungabekezelelani, kanjalo yempilo.
Overdosing Vitamin C obhekene izinso izifo, ukuntula pancreatic ne vitamin B.
Ngasiphi yobudala ongasinika izingane ikiwi
Izinzuzo lokhu izithelo kuyaqondakala, kodwa ngasiphi yobudala ingane ukumupha ikiwi hhayi wesabela impilo yakhe?
Ngokusho odokotela ikiwi kungangeniswa kube yincenye ukudla okuqinile ngemva kweminyaka emithathu. Kodwa uma "ukukhuphuka kwi expanses we-Inthanethi" phezu izinkundla, kulula ukuthola impendulo yombuzo othi lokho ubudala ongasinika izingane ikiwi. Futhi abanye omama sebeqala ukukhombisa Isithelo exotic izingane izinyanga eziyisithupha ubudala. Lezi ucwaningo ube yithuba elihle kakhulu iphazamise izinqubo wokugaya ukudla umntwana futhi kuholele embhedeni esibhedlela ngaye.
Lapho eneminyaka engu-unyaka owodwa, odokotela basikisela ngokungeza imenyu imvuthu ikiwi. Ubungozi lingaphansi kakhulu, njengoba isisu namathumbu kusukela ingane eneminyaka engu-ubudala cishe ngokuphelele ngomumo-kuya-yidla ukudla omdala. Futhi abazali abaningi yethulwe ngempumelelo ku ekudleni ingane nama-kiwi. Izithelo kuyinto ikakhulukazi eliphumelelayo ukuqunjelwa tekusebentisa kahle kuyasiza ukuqeda lolu hlobo nkinga. Kodwa kumelwe kukhunjulwe mayelana yokungezwani komzimba bese ulihlola kule ngane.
Inombolo isithelo esiyothola ingane eneminyaka engaphansi kwengu-unyaka owodwa kumele singeqi ezimbili amathisipuni amazambane ecubuziwe noma ipuleti yinye ngeliviki. Uma kungekho ukuphendula isimangaliso berry wavunyelwa kanye ngesonto.
Kuyinto ngenxa yokusabela iguliswa siphathelene nodokotela bezingane musa batusa ikiwi Come on ingane kuya eminyakeni emihlanu.
Indlela ukukhetha kiwi ingane
Amathiphu ambalwa ukukusiza ukuthenga izithelo kwesokudla.
Ukuthengwa izithelo kuphela nabathengisi seqiniso, izithelo akufanele kusetshenzwe nganoma iyiphi amakhemikhali.
Isithelo akufanele kube soft kakhulu. Lokhu kusho ukuthi overripe, noma okubi nakakhulu, baphanga. Futhi akufanele kube budisi khulu, izithelo angavuthiwe ngakho. "Green" ikiwi uyakwazi ushise ingane kakhulu lwamafinyila.
Iphunga eliphezulu izithelo etholakalayo. Uma ikiwi kuyinto ukunambitheka iwayini, musa uyithenga.
On the isikhumba akufanele izindawo kanye neziqu. amaphutha olunjalo lubonisa isifo fetus.
Kukhona izinhlobonhlobo eziningana ugqumugqumu Chinese. Umahluko wukuthi ikhasi. Kungaba nge zemicu bushelelezi. izakhiwo ewusizo zombili izinhlobo ziyafana.
Ingane akufanele inikezwe izithelo, okuyinto lapho ziqhubeka ijusi Isiqu luyaphi. Lezi izimpawu zokuqala umonakalo.
Ikhasi kumelwe baqiniseke ahlanzekile. Plaque ku elikushoyo inqubo ukuwohloka.
The best izinga izithelo kanzima, ne ingcindezi - ukubhekana nezimo ezinzima.
Ngakho ngasiphi yobudala can a kiwi ingane? Kukhona izimiso ezimbalwa ezilula ngazo sizobe kakhulu ingozi komzimba.
Ngosuku ekuhlolweni kokuqala akufanele neminye imikhiqizo ukuthi kungabangela komzimba. Ngakho, ukubukeka ukuqubuka ungakwazi kalula ukuthola imbangela.
Ngokokuqala ngqá ingane ngokwanele ipuleti eyodwa. Ngesikhathi esifanayo locezu ayidingi ukuba adle, kepha nje ncela. Kubalulekile ukulandela Ukusabela nesikhathi le mucosa kanye isikhumba naseduzane komlomo phezu ikiwi.
Isithelo lokuqala exotic kufanele kube banana. Ngokocwaningo olwenziwa, uma ingane ayibonakali iguliswa ngokulondekile lesi sithelo, le ikiwi kanye uzosabela futhi ingabi.
yokudla ongumphelelisi kufanele siqale ngamazwi ukuvumelana lamazambane ecubuziwe ke ungakwazi udlulele ipuleti, bese ukunikeza ucezu izithelo.
Uma ufuna ukunikeza ijusi ingane ikiwi, uketshezi kumele buhlanjululwe ngamanzi ukugwema ukushiswa le mucosa ngomphimbo.
Ikhasi ngempela okudinga ukuqedwa. Kubangela ukucasuka futhi hhayi amuncwa uhlelo wengane wokugaya ukudla.
Ungadliwa kophudingi ikiwi
Ukuze umntwana kusadingeka injabulo emangalisayo ngokuhlangana udla izithelo Vitamin, ukuzama ezinye zokupheka esihlwabusayo:
Marmalade ka kiwi ukujabulela kokubili abadala kanye nezingane. Ngokuba ukulungiswa uzodinga eyodwa kilogram ka kiwi, omunye ikhilogremu ushukela ingilazi yamanzi abandayo. Kiwi ochotshoziwe, ayifake imbiza yamanzi futhi imenze ubilise. Ingxube kufanele kweqa ngamathumba imizuzu emihlanu, ngemva kwalokho umlilo kufanele ukunciphisa isisindo imizuzu amahora amabili. Okuqukethwe kumele batheleka epanini cool. marmalade Cold uthathe yizicucu.
Cocktail ka ikiwi kanye Kiddies kuyodingeka ukunambitha. Uzodinga ikiwi izithelo ezimbili, ubhanana ezimbili, isipuni uju kanye amagremu 100 yogurt. Zonke izithako uhlanganise futhi abashaya nge blender.
umzali ngamunye kuyadingeka ukwenza isinqumo, ne isibalo sezinyanga ingane kumele inikwe ikiwi, ngoba umzimba wengane uhlukile. Enye ingane kuphela, uyozuza, omunye angase abangele ingozi. Uma kungenzeka, nodokotela bezingane Sisikisela seziqala ukunikeza ikiwi okungenani ngemva kweminyaka emithathu hhayi okungaphezu kokukodwa izithelo ngesonto. Omama kubalulekile ukukhumbula ukuthi Ukubusa ebaluleke kakhulu ukudla aphelele - singazilimazi!
Battle of Mukden: amabutho amaqembu, umlando